विकासको अवस्था सुधार उमुखन अवस्थामा रहेको छ - Arthakoartha.com
कैलाली जिल्लाका स्थानिय विकास अधिकारी केशव प्रसाद विमली संग गरीएको कुराकानी
कैलाली जिल्लाको विकास अवस्था कस्तो रहेको छ ?
कैलाली जिल्लामा विकासको अवस्था सुधार उमुखन अवस्थामा रहेको छ । भने पुँजीगत खर्चका अनुसार ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ र मुख्यतया जिल्ला विकास समिति कैलालीको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति राम्रो रहेको छ किन भने योजनाहरु धैरै मात्रा मा बढीरहेका छन् । तर बजेट अभावका कारणले गर्दा ३९ सय ियोिजनाहरु ईलाका बाट पास भयरका काले २४० ओटा योजनाहरु छनोट गरी काम गरेपनि बाकी गुना योजनाहरु बाँकी रहेका छन् । यस बर्षमा भने स्थानिय तहबाटै आएका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने छौँ ।
विकासको धैरै सम्भावना रहेको कैलाली जिल्लामा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुलेको प्रयास र सक्रियताका आधरमा पूआधार विकासका साथै विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यक्रहरु संचालन भईरहेकाले पनि विगत भन्दा अहिलेको अवस्था विकास निमार्णकार्य कैलाली जिल्लाले फड्को मारेको छ । जिल्लाका जन्ताहरुको माग र आवश्कता धैरै रहेकाले बजेट अभाले प्राथमिकतामा पा्रप्त बजेट कम रहेकाले कार्यक्रम संचालन गर्न सकिरहेका छै नौं विकासका हिसावले भन्ने हो भने अहिले कैलाली जिल्ला विकास भएको छ ।
२ जिविसद्धारा संचालित विकास निमार्णका योजनाहरुको मुल्याड्ढक र अनुगमन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
अनुगमन नियमित गरिने प्रक्रिया हो । अनुगमन विभिन्न चरणमा गरिन्छ । कार्यालयगत तथा प्राविधिक रुपमा जिविस कैलाली द्धारा संचालित विकास निमार्णका योजना तथा मुल्याड्ढन र अनुगमन यस जिल्लामा रहेका राजनितिक दल पत्रकार समाजसेवी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु संग नियमित रुपमा सबै संग छलफल सहकार्य सहमतिका आधारमा प्रत्येक चौमासिकमा स्थलगत क्षेत्रमा गई योजनाहरुको अनुगमन गरिरहेका छौं ।
३ जिविस कैलालीको आवधिक योजना र कार्यान्वनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
जिल्ला विकास समिति कैलालीको आवधिक योजनाहरुलाई कार्यान्नवन गर्न समस्या र चुनौति बरावर रहेको छ । जिविसले आर्थिक वर्ष २०७२ ÷ २०७३ देखी आर्थिक बर्ष २०७६ ÷२०७७ सम्मका लागी ५ वर्षिय आवधिक जिल्ला योजना तयार गरेको छ । आवधिक जिल्ला विकास योजनाले विभिन्न विषय क्षेत्रका सवल पक्ष सम्भावना र अवसर समस्या पहिचान गरि योजना तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरेको छ भने सरोकारवाला हरुको सहभागितामा योजनाहरु तय गरियको र आवधिक जिल्ला योजना सम्पुर्ण जिल्ला वासीको रहेकाले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र मुख्य गरी निजिक्षेत्रले आवधिक विकास योजनाहरुलाई सहयोग पर्ने देखीन्छ ।
एम सि पिएममा जिविस कैलालीको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
स्थानिए निकाए विक्तिय आयोगको सचिवालयले जिल्ला विकास समितिहरुको न्यून्तम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन एमसि पिएम गर्ने गरेको छ जस्मा जिल्ला विकास सिमति कैलालीले आव २०७१ ÷ २०७२ मा न्यूनतम र्सतमापन उत्तिर्ण भई कार्या सम्पादन मापा तर्फ ५९ अंक प्राप्त गरेको छ । जस्मध्य कार्यासम्पादनका ४६ ओटा सुचकहरु मध्य जिविस कैलालीले १६ ओटा सुचकमा अंक प्रप्त गर्न सकेको छैन । आगामि दिनहरुमा कार्यासम्पादन मापन तर्फ कम्जोर रहेका क्षेत्रहरुलाई सुधार गरि अगाडी बढेने योजना रहेको छ ।
५ कैलाली जिल्लामा जलवायु परिवर्तको विकासको अबस्था कस्तो रहेको छ । यसले कस्तो किसमको प्रभाव पारेको छ ?
विश्व व्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख सम्स्याको रुपमा रहेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन जोखीमको हिसावले नेपाल चौथौ स्थानमा रहेको छ । कैलाली जिल्लामा रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी संघस्थाहरुले जलवायु परिवर्तलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न किसमका कार्यक्रहरु संचाल गरिरहेका छन् भने यसको विकास पनि बढ्दैगएको अबस्थामा रहेको छ । लापाले नेपालमा जलवायु परिवर्तन कार्याक्रम कार्यान्वन गर्न हरियो बन , अनुकुलन , विपदजोखीम लगाएतका कार्यक्रहरु संचालन भई रहेका छन् । यसको प्रभाब जलवायु परिवर्तले गर्न असर बारे जानकारी जानकारी प्रप्त भई यसको प्रभाव लाई कम गर्न जनचेतनात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
गत आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षमा जिविस कैलाली बाट संचालित योजनामा कार्यान्वन गर्नमा के चुनौति थियो ??
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा केही विकास बजेट र कार्याक्रम मा वृद्धी भएको देखीन्छ । चालु आवको लागी आव २०७२÷२०७३ को लागी जिल्ला परिषदबाट जिल्लाको कुल बजेट ६ अर्व २७ करोड ११ लाख ५१ ह्जार बजेट प्रस्तावित गरेको थियो । जिविस तर्फ विभिन्न २२ ओटा शिर्षीक कार्यक्रम तर्फ कुल १ अर्ब १८ करोड ७३ लाख ४० हजार बजेट प्रस्ताब गरेको थियो । विकास बजेटमा वृद्धी भएता पनि सुदूरपश्मिमा भएको लगातार बन्द , आम हड्ताल र आन्दोलनका कारणले गर्दा कार्यान्वन गर्नमा समस्या र चुनौति उत्पन्न भयो । केही बजेट ढिला निकासा भएका कारणले आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक र विकास निमार्णका महत्वपुर्ण योजनाहरु समस्या आयो र जिविसमा प्राविधिक र दक्षजनशक्तीको कमी भएका कारणले गर्दा कार्यान्वन गर्नमा चुनौति देखीएको थियो । करिव ६ सय ७२ ओटा योजना भन्दा माथिरहेकाले समयमै डिजाईन , स्टेमेट जाँचपासमा उपभोक्ता समिति ढिला गठन विबाद चुलिदा चुनौति रहेको थियो ।
जिविस कैलालीको आन्तरिक आयको अबस्था र यसका सा्रेतहरु के के हुन ?
जिविस कैलालीको आन्तरीक आयको अबस्था राम्रो रहेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागी जिविसको आन्तरिक कोष तर्फ ४ करोड ७५ लाख ९८ हजार अनुमानित आय पहिचान गरी कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । दलहन ,तेलहन ,खाद्य ,बाट १ करोड ३५ लाख ५१ ह्जार रहेको छ । यसका स्रोतहरु ढुड्ढगा , गिट्टी बालुवा स्थानिय विकास कर मोहना नदीमा माछा मार्ने ठेक्का ,जिल्लामा उत्पादन भई बाहिर निकासा हुने , पशुसेवा चौपायाँ निकासी जनावरहरुका हाड् सिंड्ढ ,खुर यसका स्रोत रहेका छन् भने राजस्व तर्फ मालपोत रजिष्टेशन मालपोत कर हुने रोयल्टी हुन ।
हाल सम्म संचालन भएका योजनाहरु कति रहेका छन् भने सम्पन्न र बाँकी कतिरहेका छन् ?
हल सम्म पहिचान गरि छनोट गरियका योजनाहरु ६ सय ७२ रहेका छन् । भने केही योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् र अन्य योजनाहरु निमार्णधिन अवस्था रहेका छन् । जिविसले ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरु संचालन गर्ने निदेशिका भयता पनि जन्ताहरुका धैरै मागहरु रहेकाले ५० हजार भन्दा माथिका योजनाहरु छनोट गरी कार्यान्वन भएका छन् ।
आर्थिक हिसाबले कैलाली जिल्ला को विकासको अवस्था के छ र गरिबको स्थिीति कस्तो रहेको छ त ?
सुदूरपश्मिको मुख्य व्यापारिक केन्द्र र तराईको जिल्ला भएकाले विगत भन्दा अहिको अबस्थामा आर्थिक गतिविधी बढ्दै गएको र विकास निमार्णमा पनि निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक रुपमा कैलाली जिल्लामा अन्नको उत्पादन गर्ने क्षेता धैरै रहेको र यस क्षेत्रमा उत्वादन हुने अदुवा , दूग्ध उत्पादन , केरा खेती , बगर खेती , उखु खेती मह उत्पादन , मासु उत्पादन तरकारी खेती उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेकाले यो क्षेत्रमा आर्थिक विकास बढ्दो क्रममा रहेको छ । कैलाली मा गरिबहरुको स्थिीति नाजुक अबस्थामा रहेको छ सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय अन्र्तरग जिविस कैलालीले गरेको सर्वेक्षणमा १ लाख ३१ ह्जार ७ सय ५९ घरपरिवार मध्य ४० हजार गरिवको पहिचान गरी तथ्याड्ढक रहेको छ भने १७ हजार २ सय ४९ घरपरिवार पहिचान हुन सकेको छैन् । जिविसले गरिवहरुको सुची गाविसहरुमा सार्वजनीक रुपमा गुनासो संकलन अन्नतीम सुची तयार गर्ने योजना रहेको छ ।
स्थानिय निकाएमा जनप्रतिनिधी विहीन हुंदा विकास निमार्ण कार्यमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त नि ?
स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन नियावली जनप्रतिनिधि मुलक सिस्टमबाट संचालन गर्ने किसमले तयार गरियको भयता पनि २०६९ देखी स्थानिय निकाएमा जनप्रतिनिधि बिहिन रहेकाले ठूला विकास निमार्ण योजनाहरु जिविसले संचालन गरेता पनि यस को प्रभाव भने परेको नै छ । जिल्लाका राजनितिक दलहरु संग छलफल गरेर साझा सहमतिका आधारमा कार्यक्रम तथा योजनाहरु संचालन गरिरहेका छौं भने ऐन अनुसार गर्न नसकिएकोले समस्या चाहि रहेको छ ।
राजनितिक दलहरुको सहयोग कस्तो रहेको छ त ?
यस क्षेत्रमा रहेका राजनितिक दलहरुले यस जिल्लाको विकास निमार्ण कार्य तथा अन्य क्षेत्रमा महत्वपुर्ण राम्रो सहयोग गरेका छन् । सहकार्य , छलफल विचार गोष्टी सेमिनार सहमतिका आधारमा कार्यहरु गरेकाले पनि राजनितिक दलहरुको सहयोग रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिविस कैलालीले कति ओटा योजनाहरु सम्पन्न गरेका थिए भने बाँकी कतिरहेका थिए ?
ीजविस कैलालीले गत आर्थिक वर्षमा ३३ सय ५२ ओटा योजनाहरु ईलाका स्तरिय गोष्टी बाट प्रथमिकता प्राप्त गरी आएका थिए भने जसमध्य ८ सय योजनाहरु छनोट गरियका थिए । भौतिक निमार्णका योजनाहरु ७ सय ३८ र बजेट ५ लाख भन्दा कम लागतका थिए भने सम्पन्न ७ सय ९८ भने सम्पन्न बाँकी योजनाहरु ५२ ओटा रहेका छन् ति योजनाहरु क्रमागत रुपमा रहेका छन् ।
विकास निमार्ण कार्यमा गैर सरकारी कार्यालयको काम प्रभाव कारी छ त ?
कैलाली जिल्लामा रहेका गैर सरकारी कार्यालयहरुले विकास निमार्ण कार्यमा प्रभावकारी काम नै गरेको छ । गैर सरकारी कार्यालयका कार्यक्रमहरु जनचेतनात्मक रहेकाले जन्ताहरुको माग र आवश्कता अनुसार पूआधार विकासका क्षेत्रमा जनतेचना कार्यक्रमले जन्ताहरुको क्षेमता अधिवृद्धी तथा आन्तरक र बाह्य रुपमा गैर सरकारी कार्यालयको काम प्रभाबकारी रहेको छ ।
विकास निमार्ण कार्यमा बाहिर रहेका जन्ताहरुको अवस्था कस्तो छ ?
कैलाली जिल्लाका विभिन्न दुर दराजमा रहेका विपन्न वर्ग समुदायहरु ीवकास निमार्ण कार्यमा पुर्ण रुपमा पहुचमा पुग्न सकेका छैन्न् ।नेपाल सरकारले ति समुदायमा रहेका जन्ताहरुका लागी छुट्टै कार्यक्रम योजना बनाउन आवश्क परेको छ । ति समुदायलाई पहुचमा ल्याउन स्थानिय स्तर बाटै पहल गर्नु पर्ने देखीएको छ । विकास निमार्ण कार्यमा पहुच मा नपुगेका विपन्न बर्ग नै रहेका छन् भने यीनीहरुको अवस्था ज्यादै र खस्कीदो तथा दैनिय रहेको छ । जिविस कैलालीले यी जन्ताहरु का लागी केही कार्यक्रम पहल गरेको छ ।
जिविस मा भ्रष्टाचार रहेको छ भन्दछन् नी तपाईको विचारमा के लाग्छ ?
तपाईले सोधेको प्रश्न सही हो हाल सम्म भ्रष्टाचार भएको कुनै पनि प्रमारण र लिखित उजुरी परेको छैन् । जन्ताहरु यो विषयमा सोधनु राम्रो कुरा जिविसका योजनाका खाता र फाईलहरु ह्ेर्न सैबले सक्द छन् त्यो विषमा जिविस तयार रहेको छ ।
कोरोना भाइसरको त्रासले दाङका १३ सय होटल बन्द
११ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवालाई आग्रह, आफुखुसी भर्ना गरे बदर गरिने
कोरोना नियन्त्रणमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न क्यान महासंघको आग्रह